Abbaan taayitichaa akkaataa qajeelfama inni kaa’een sab qunnamtii marsaritiwwanni hin galmmofnne akka cufuu beeksisee - ዜና ከምንጩ
Abbaan taayitichaa akkaataa qajeelfama inni kaa’een sab qunnamtii marsaritiwwanni hin galmmofnne akka cufuu beeksisee
Abbaan taayitaa sab qunnamtii Itiyoophiyaa akkaataa murtii galmee raggaasiseen dhaabbiile mar sariitii hingalmmofnne akka cufuu Addis Maaladaatti himeera.
Abbaan taayitaa sab qunnamtii Itiyoophiyaa akkaataa deemsa galmee kaa’een dhaabbileen miidiiyaa motummaafii dhunfaa hin galmoofnne kamiyyu cufamuu akka danda’an Daaraktara ol’aanaa abb aa taayitichaa Abarraa Addis Maaladaatti himaniiru.
Warreen seera kabajan keessummeessuu itti gaafatamaafii dirqama abbaan taayitichaa akka qabu hundaa dhaabbilee midiiyaa seera ba’ee hin kabajnnee cufuus taayiitaa qaba jadhaniiru.
Daaraktarichii akka dubbataniitti yoo ta’e miidiyaan galmee midiiyaalee dhaabbata sab qunnamtii Itiyoophiiyaa keessa hin jirree kamiyyuu motummaa irraa beekamtii seeraafii faayiidaa garaa garaa hojiisaa raawachuuf isa danddessisuu kamiyyu arggachuu hin danda’u jadhamuu isaa Addis Maaladaan mirkannesuu danddessetti.
Dabalaniis eegumsa argachuuf beekkamtii argachuu ijaa barbaachisuu galmee kanaan hirmaatee beekamtii kan hin arggannee dhaabbanni miidiiyaa kamuu miidhaafii kasaaraan yoo irra ga’ee rakiinicha ofii akka fudhatuufii motummaan eeguumsa kamiyyu akka hin taasifnneef akkasuumas gaafatamuummaa akka hin qabaanne ibsaniiru.
Galmeen kun kan barbaachiseefis namnni kamiyyuu bilisummaan waan itti dhaga’amee dhiyyesuufii qeequu da’eefatee maqa balleessa gar maleefii gochaa seeraan alaa amma biyya diiguutti ga’u umamuu danda’an dhaabsisuufii jadhameera.
Itti dabaluudhaaniis ammam illee lammiin kamu yaada kennuufii qeequu mirga yoo qabaatellee gochaa mirga namoomaa miidhuufii biyya ammoo balaaf saaxiluu raawachuu dhabuuf itti gaafatamas dirqamas akka qabuu hubachuudhaan galmee kana raawachuufi gochaa kanarraa of qusachuun seera qabeessummaa ta’u beekuu akka qabuu kan dubbatan.
Walga’iichaaniis dhiiyeenyatti qaamoolee sab qunamtii kanaa waliin mareen akka gaggefamuufii tajaajiila kennittonni galmee hin raawwannee galmee kana kessa akka galan kan taasiifamuu yammu ta’u dhaabanni tajajila marsariitii kennu kan motummaas ta’e dhuunfaa kana hin raawwannee motummaadhaan beekamtii kamuu ijaa hin kenamnneef akka cufamuu dubataniiru.
Dhaabbileen eerga galmeen kuun raawwatee banamaniis yoo jiiraatan yoo galmaa’u baatan carraa tajajila kennu akka hin atgganne eerameera.
Daabbatichii wayiita ammaa galmee kana gaggeessaa akka jiruufii miidiiyaalee bebeekkamoo 35 ol ta’an galmee kanaan kan hirmaachisee yammu ta’u dhaabbileen amma ammaatti galma’aniis garu barreefama birmadummaa biyyaa sarbuu dabarsuurraa of hin qusanne ijaa ta’ee seera ba’ee kana hubatanii akka sirreessan itti himamuutuu ibsame.
Dhaabbileen miidiiyaa tokkon tokkonsaa hojiin hojjatu guuyyaa guuyyaatti gabaafnnii taasiifamaafii akka jiru kan eeran daayireektarrii ol’aanaa kuun dhaabbileen miidiiyaa haala biyyattiin keessa jirtuufi diiploomaasii biyyatti akka hubatan hubachiifnni yoo keennamees akkaataa hojji baran irraa yoo of quusachuu baatan nii cufamuu jadhaniiru.
Daaraktara komunikeshinii abbaa taayitiichaa akka ibsaniitti abbaan taayiitaa sab quunnamtii Itiyoophiiyaa baka buutoota miidiiyaalee garaa garaa waliin yero daddabalamaa walga’ii gaggeessaa jira.
Torbee darbee hooteela intarkontinantaalitti waltajji maree gaggefameen birmadummaa biyya kabachiisuufii fayiidaa ummataa eegsiisuuratti miidiiyaaleen shoora gumaachuu qaban iratti ittii gaafatamtoota gurguddaa ministeera dhimma alaarraa rayyaa ittisaafii ministeera ittisaarraa dhufan waliin mareen gaggefamuusaa dayireektariichii Addis Maaladaatti himaniiru.
አዲስ ማለዳ 22 Adoolessa 2013 No 9
Total views : 7504676